यसरी हुँदैछ कक्षा १२ को परीक्षा, विद्यार्थीले कहाँबाट कसरी दिन पाउछन ? यस्तो छ बोर्डको तयारी – Rapti Khabar
काठमाडौँ, कात्तिक १५ । चार लाखभन्दा बढी परीक्षार्थी सहभागी हुने कक्षा १२ को आसन्न परीक्षा मर्यादित र कोरोनाबाट सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
सङ्क्रमण कायमै रहेको अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन हुने भएकोले परीक्षालाई सङ्क्रमणको हिसाबले पनि सुरक्षित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको हो ।
परीक्षा केन्द्रमा विद्यार्थीलाई भौतिक दूरी कायम गरेर मात्र परीक्षा लिनुपर्ने माग गरिएको छ । मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न लगाउनुपर्ने, घरबाटै सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सेन्टरमा समेत त्यसको प्रबन्ध हुनुपर्ने माग अभिभावकहरूले गरेका छन् ।
विद्यार्थीलाई राम्रो हावा खेल्ने वातावरण अनुकूल भएको कक्षा कोठामा परीक्षा लिनुपर्ने सुझाव अभिभावकहरूको छ । सङ्क्रमण सर्ने सम्भावना कम हुने भएकोले विद्यार्थीलाई सोही अनुसारको कक्षा कोठाको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यसका लागि अभिभावकले पनि विद्यार्थीलाई परामर्श दिनुपर्ने अध्यक्ष भण्डारी बताउनुहुन्छ ।
खासगरी विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका सङ्कलन र परीक्षणमा सचेतना अपनाउनुपर्ने अवस्था रहेको सहायक प्रअ गौतमले बताउनुभयो । होम सेन्टर भएकोले परीक्षा सञ्चालनमा केही सहज हुने आशा गरिएको जनाइएको छ ।
यसबाट विद्यार्थीलाई डेरा लिएर बस्नु नपर्ने, धेरै टाढा जानु नपर्ने र परीक्षार्थीका बीचमा धेरै जमघटसमेत हुनु नपर्ने भएकोले परीक्षालाई स्वास्थ्यको हिसाबले पनि सुरक्षित बनाउन सकिने जनाइएको छ । ४० नम्बरको लिखित परीक्षाका लागि यस पटक विद्यार्थीहरू बढीमा डेढ घण्टा मात्रै परीक्षा
हलमा रहनेछन् ।
जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्ने गरी प्रत्येक विद्यार्थीको कम्तीमा दुई÷दुई मिटरको दूरी कायम गरी एउटा परीक्षा हलभित्र बढीमा २० परीक्षार्थी रहने व्यवस्था मिलाई, स्थानीय तह, स्वास्थ्य सङ्घ, संस्थासँग आवश्यक समन्वय गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था बोर्डले मिलाएको छ ।
परीक्षा केन्द्रमा हेल्थडेस्कको समेत स्थापना गर्न बोर्डले जारी गरेको परीक्षासम्बन्धी कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । बोर्डले विद्यार्थीलाई कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको शङ्का भएका अलग्गै कोठामा राखी परीक्षा लिने व्यवस्था गर्न निर्देश गरेको छ ।
मङ्सिर ९ गतेबाट सुरु भएको परीक्षा १६ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
यस पटकको कक्षा १२ को परीक्षामा विद्यार्थीको कक्षा ११ को ४० प्रतिशत मूल्याङ्कनलाई पनि जोडिनेछ । साथै, कक्षा १२ को ४० प्रतिशत लिखित परीक्षा र विद्यालयले लिने आन्तरिक मूल्याङ्कनको २० प्रतिशतका आधारमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरिनेछ । यो खबर शेषकान्त पण्डितले गोरखापत्र दैनिकमा लेखेका छन् ।
यसकारण जाडोमा कोरोना संक्रमण झन् तीव्र बन्ने अनुमान, कसरी बच्ने त ? हेर्नुस